जापानले दुई वर्षपछि विदेशी पर्यटकका लागि सिमाना खुला गर्यो – AKSANCHAR
जापानले दुई वर्षपछि विदेशी पर्यटकका लागि सिमाना खुला गर्यो
ए.के. सञ्चार । १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १०:२३
काठमाडौं । दुई वर्षदेखि पर्यटकका लागि बन्द रहेको जापानले ९८ देश र क्षेत्रका पर्यटकका लागि आफ्नो सिमाना खुला गरेको छ । तर, केही प्रतिबन्ध भने अझै जारी राखिएको छ । जापानले कोभिड भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चालेको थियो । सन् २०२० मा सम्पन्न टोकियो ओलम्पिक खेलमासमेत विदेशी आगन्तुकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
विदेशी वासिन्दा र व्यावसायिक यात्रुहरूका लागि यात्रा प्रतिबन्धहरू पहिले नै खुकुलो पारिएको थियो र सरकारले १ जुनदेखि दैनिक विदेशी आगमनको सीमा २०,००० पुर्याएको छ ।मार्चको मध्यदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रवेश अनुमति दिइएको छ ।
१० जुनदेखि टुर समूहहरूलाई देश प्रवेश गर्न अनुमति दिइनेछ । तर, एक सय देश र क्षेत्रलाई रातो, पहेलो र निलो गरी तीनओटा जोखिम समूहमा विभाजन गरिएको छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार जोखिम समूह मूल्यांकन गरेर ती देशबाट आउने आगन्तुकहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारेमा निर्धारण गरिनेछ ।
पयर्टन जापानको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य हिस्सा हो । सन् २०२० मा पर्यटक आगमन ९० प्रतिशत भन्दा बढी घटेको थियो । तर, विदेशी पर्यटकहरुका लागि सिमाना खुला गरेसँगै पयर्टन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
‘लगभग दुई वर्षदेखि जापानको सीमा बन्द भए पनि हामी जापान भ्रमणमा धेरैले रुची जनाएको देखिरहेका छौं । सीमा पूर्ण रूपमा खुला हुने बित्तिकै बुकिङमा भिड हुनेछ’, इन्टरपिड ट्राभलकी प्रबन्ध निर्देशक जिना बेन्चेखले भनिन् ।
आज १५ औं गणतन्त्र दिवस, कर्णाली प्रदेशमा बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइदै
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १०:२३
सुर्खेत । आज १५ औं गणतन्त्र दिवस देशभर बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइदै छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । सोही दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ । त्यस्तै कर्णाली सरकारले […]
१८ बैशाख २०७९, आईतवार १२:३४
आज सुनको मुल्यमा गिरावट, कति पुग्यो तोलाको ?
३ श्रावण २०७८, आईतवार १६:११
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०९:३३
अफगानिस्तानमा शृंखलाबद्ध विस्फोट, १२ जनाको मृत्यु
८ भाद्र २०७८, मंगलवार १०:३६
सुर्खेतमा निषेधाज्ञाको अवधि एक हप्ता थप
१ भाद्र २०७७, सोमबार २३:००
सर्वोच्‍च अदालतका तीन कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण
९ आश्विन २०७८, शनिबार १२:२८
अरिङ्गालको टोकाइबाट एक जनाको मुत्यु